ADDIS ABABA(Wararka Maanta)-Midowga Afrika ayaa cambaareeyay rabshadaha ka socda Koonfur Afrika oo ay ku dhinteen 72 qof.
Dibadbaxyada looga soo horjeedo xarigga madaxweynihii hore Jacob Zuma ayaa isu badalay bililiqo iyo burbur hantiyeed ka billowday gobollada qaar.
“Guddoomiyaha guddiga Midowga Afrika Moussa Faki Mahamat, wuxuu si adag u cambaareynayaa rabshadaha sababay dhimashada dadka rayidka ah iyo muuqaalada naxdinta leh ee dhaca hantida shacabka iyo kuwa gaarka loo leeyahay,” ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay Midowga Afrika, warbixinta ayaa intaa ku dartay “Guddoomiyuhu wuxuu ku baaqayaa in si deg-deg ah lagu soo celiyo kala-dambayntii, nabadda iyo xasilloonida dalka iyadoo si buuxda loo ixtiraamayo ku dhaqanka sharciga,”
Wuxuu sheegay in ku guuldareysiga xalinta rabshadaha ay saameyn xun ku yeelan doonto dalka iyo gobolka oo dhan.
Guddoomiye Faki ayaa tacsi u diray ehellada dadkii ku geeriyooday rabshadaha ka socda dalkaas isaga oo sidoo kalena kuwa ku dhaawacmay caafimaad u rajeeyay.
Laamaha ammaanka Koofur Afrika ayaa sheegay in qulqulatooyinka ka socda dalkaas ay u xireen 1,234 oo horkacayay falalka boobka ah ee rabshadahaasi ku lammaansanaa.
Ismaamullada KwaZulu Natal iyo Gauteng ayaa lagu soo warramayaa in ay deegaannada ugu daran ee ay rabshaduhu saameeyeen.
Abiy Axmed oo wacad ku maray in uu iska caabin doono Kooxda TPLF -…
Wararka Maanta : Taalibaan oo qabsatay magaalooyin waaweyn oo horleh - Wararka Maanta:...